संचारकर्मी रबि लामिछानेले प्रधामन्त्रीओली सरकारलाई खुल्लापत्र ! पत्रमा यस्तो लेखिएको छ तुरुन्तै हे’र्नुस् ! – Khabar Patrika Np
संचारकर्मी रबि लामिछानेले प्रधामन्त्रीओली सरकारलाई खुल्लापत्र ! पत्रमा यस्तो लेखिएको छ तुरुन्तै हे’र्नुस् !
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०२, २०७८ समय: २१:३१:३६
कोरोनाका कारण दैनिक ९ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने २ सय भन्दा बढीले दैनिक ज्या’न गु’माइरहेकाे अवस्था छ। जनताहरु अस्पतालमा छट्पटी रहेका छन तर वि’डम्बना भन्नुपर्छ हाम्रा देशको नेताहरू कुर्सी बचाउने खेलमा सत्ताकाे माेहमा लम्पट भएर लागिपरिरहेका छन्। देशको राजनीति अवस्था र याे म’हामा’रीलाई मध्यनजर गर्दै संचारकर्मी रबि लामिछानेले ओली सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै
कोरोनाका कारण दैनिक ९ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने २ सय भन्दा बढीले दैनिक ज्या’न गु’माइरहेकाे अवस्था छ। जनताहरु अस्पतालमा छट्पटी रहेका छन तर वि’डम्बना भन्नुपर्छ हाम्रा देशको नेताहरू कुर्सी बचाउने खेलमा सत्ताकाे माेहमा लम्पट भएर लागिपरिरहेका छन्। देशको राजनीति अवस्था र याे म’हामा’रीलाई मध्यनजर गर्दै संचारकर्मी रबि लामिछानेले ओली सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै यस्ताे लेख्नुभएको छ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री के पी ओली ज्यु, जनमैत्री अस्पतालको प्राङ्गणबाट नमस्कार।यहाँ मात्र होइन हरेक अस्पतालमा बिरामीहरुको अवस्था पी’डा भान्दापनि पिडा’दायी छ। आज तपाईं पुनः प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सपथ लिदै हुनुहुदो रहेछ। सायद राजनीतिक लडाइ अब अलि मत्थर पनि भयो होला।
आज बाट कृपया को’भिडमा मात्र फोकस भैदिनुहुन म यो देशका तमाम बिरामी र तिनका आफन्तको तर्फबाट दश औला जोडि, तपाईंको पाउ नै समातेर नम्र निवेदन गर्द्छु। तपाईंको अस्पताल पर्दा तपाईंले बेड,अक्सिजन, रगत वा किड्नी नपाएको भए के हुन्थ्यो होला? अहिले जनताको हालत त्यो भन्दा कम खराब छैन। नपत्याए, सपथ पछि कुनै पनि अस्पतालको भ्रमण गर्नु होला।
यति बेला तपाईं जनताको आशुको आहालसँगै सपथ ग्रहण गर्दै हुनु हुन्छ। यो परिस्थितिका लागि तपाईलाई मात्रै दोष दिएको होइन, यो स्थिति आउनुमा तपाई, म र अरु धेरै जना, किसिम किसिमले दोषी छौ। एउटा सामान्य ब्यक्तिले जति गर्न सक्छ,म त्यो सबै गर्न तयार छु। के तपाई पनि तयार हो? पार्टी बच्यो, पद बच्यो। अब आउनुहोस् जनता बचाऔं।
अब यसपछि पनि केही समयका लागि तपाई वा तपाईंका कुनै नेता,मन्त्रीहरूको प्राथमिकता कोभिड भन्दा अर्को केही हो भने तपाईलाई र त्यो जो कोहि लाई पनि धेरै जनाबाट, कम्तीमा पनि म बाट चाहिँ ख’तरा छ। (ज्या’नको होईन है, अपब्याख्याको कष्ट नगर्नु होला, ब्याख्या गर्दै गरौंला)।
यो धम्की.. दिन खोजेको होइन, दिएकै हो। तपाईका वैतनिक अवैतनिक सेना हरु सँग लडेको त कति भो कति, ।७ जुनी डराउन्नडराउने र हिसाब दिने भगवानलाई हो,कुनै पार्टिका लठैतलाई होइन । यस अघि तपाईंले सपथ लिदा भगवानको नाममा सपथ लिनु भएको थिएन।तर आज चाहि कृपया देश र जनतासँगै भगवानको नाममा पनि सपथ लिइदिनु होला। मलाई लाग्छ,यो महा’मारीमा अहिलेसम्म यो देश र यस देशका जनता लाई भगवानको बाहेक कसैको भरोसा छैन। तपाईको कार्यकाल असल रहोस्।